५५ रुपैयाँमा ३ दिन सम्म अनलिमिटेड युट्युब हेर्न पाउने नेपाल टेलिकममा ? कसरी लिने त यो अफर…हेर्नुहोस । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
यो पनी पढ्नुहोस!
यात्रुहरुले पनि मा’स्क र से’निटाइजरको प्रयोग गरेका थिए ।विराटनगर बाट काठमाण्डौ सं’चालन भएपछि अन्य लामो दूरीका सवारी साधनको ध’माधम बु’किङ सुरु भएको कोषध्यक्ष धमलाले जानकारी दिनु भयो । विराटनगरबाट लामो र छोटो दूरी गरी तीन सय ५० वटा सवारी साधन सञ्चालन हुँदै आएका थिए।
Previous ”हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था संविधानसभा छ”-पुर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ, हेर्नुहोस् ।
Next जसपाबाट निलम्बित भएकी सरिता गिरीले नयाँ पार्टी घो’षणा गर्दै, यस्तो हुनेछ उनको पार्टीको नाम…हेर्नुहोस् ।